Mbido amụma nzuzo
LifeBogger (lifebogger.com) nwere mmasị na nchekwa data ka anyị maara nke ọma na ndị ọrụ anyị (gị) na-eche maka otu esi eji ozi nkeonwe. Nọrọ na elu-arụ raara onwe ha nye ihe nkesa na-, anyị na-emesi gị obi ike na anyị niile ahịa ozi na-ẹkenịmde nzuzo. Anyị anaghị ere ahịa ndị ahịa anyị ma ọ bụ ozi ndị ahịa anyị.
Adreesị weebụsaịtị anyị bụ: https://lifebogger.com.
Data nkeonwe anyị na-anakọta na ihe kpatara anyị ji anakọta ya:
LifeBogger na-anakọta data site na ndị ọbịa na saịtị anyị. A na-achịkọta data anakọtara dị ka aha, adreesị ozi-e, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, adreesị nzipu ozi maka naanị ebumnuche nke ịnye ndị ọbịa anyị ọrụ kacha mma yana imelite ha mmelite nke ọrụ anyị. Ozi nkeonwe nwere ike ịgụnye, mana ọnweghị oke na:
Address Adreesị ozi ịntanetị.
Aha mbụ na aha ikpeazụ.
Mgbe ndị ọbịa hapụrụ ihe na LifeBogger, anyị na-anakọta data egosiri na mpempe akwụkwọ, yana adreesị IP nke ndị ọbịa na onye ọrụ ihe nchọgharị nchọgharị iji nyere aka nchọpụta spam.
Otu anyị si eji data nkeonwe:
LifeBogger na-eji data anakọtara maka ebumnuche dị iche iche:
Iji gwa gị gbasara mgbanwe ọrụ anyị.
● Iji nye nkwado ndị ahịa.
Iji kpokọta nyocha ma ọ bụ ozi bara uru ka anyị wee nwee ike ịkwalite ọrụ anyị.
Ntọala iwu maka ịnakọta na nhazi data nkeonwe:
Ndụ LifeBogger bụ ihe iwu kwadoro maka ịnakọta na iji data nkeonwe akọwara na Iwu Nzuzo Nchedo Data a dabere na data onwe anyị anyị na-anakọta na otu ọnọdụ anyị na-anakọta ozi:
I nyela ụlọ ọrụ m ikike ime nke a.
●hazi data nkeonwe gị dị na mmasị nke LifeBogger.
B LifeBogger na-agbaso iwu.
Njide nke data nkeonwe:
LifeBogger ga - ejigide ozi nkeonwe gị naanị ogologo oge ọ dị mkpa maka ebumnuche akọwapụtara na Iwu Nchedo Data a.
Anyị ga-ejigide ma jiri ozi gị ruo n'ókè dị mkpa iji rube isi na iwu anyị, dozie esemokwu, na ịmanye atumatu anyị.
Ọ bụrụ na ịhapụ okwu na LifeBogger, azịza ya na metadata ya ga-adịgide ruo mgbe ebighị ebi. Nke a bụ ka anyị nwee ike ịmata ma kwado ihe ọ bụla na-esochi okwu na-akpaghị aka kama ijide ha na kwụ n'ahịrị. Enwere ike nyochaa ihe ndị ọbịa site na ọrụ nchọpụta spam na-akpaghị aka.
Ikike ndị ị nwere banyere data gị:
Anyị ga-eziga mmelite Akụkọ Akụkọ, site na ozi, email ma ọ bụ mgbasa ozi n'olu, site n'oge ruo n'oge, na ndị ọbịa anyị gosipụtara mmasị ma rịọ ụdị ozi ahụ. Dịka onye ọbịa, ị nwere ike ịpụ na ịnweta ụdị onyinye / ọkwa dị otú ahụ site na isoro njikọ nwepu aha na nkwukọrịta a kapịrị ọnụ ma ọ bụ site na ịkpọtụrụ LifeBogger ozugbo.
Ọ bụrụ na ị bi na European Economic Area (EEA), inwere ụfọdụ ikike nchekwa data. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ka eme ka ị mara ihe data nkeonwe anyị jidere gbasara gị ma ọ bụrụ n’ịchọrọ wepu ya na sistemụ anyị, biko kpọtụrụ anyị.
N'ọnọdụ ụfọdụ, ịnwere ikikere nchedo ndị a:
Ikike inweta, melite ma ọ bụ ihichapụ ozi anyị nwere na gị
● Ikike nke imezi ihe
● Ikike igbochi
● Ikike nke ibu ọrụ data
● Ikike ịhapụ nkwenye
Ngosipụta na nke atọ:
Anyị anaghị ekekọrịta ma ọ bụ ree ozi nkeonwe gị na ndị ọzọ.
Anyị igosipụta ozi naanị na ndị na-esonụ ikpe:
Dị ka iwu chọrọ, dị ka irube isi na akwụkwọ ịkpọ òkù ma ọ bụ usoro iwu yiri ya.
mgbe anyị kwenyere n'ezi okwukwe na nkwupụta dị mkpa iji kpuchido ikike anyị, kpuchido nchekwa gị ma ọ bụ nchekwa nke ndị ọzọ, iji nyochaa aghụghọ, ma ọ bụ ịzaghachi arịrịọ gọọmentị
Ọ bụrụ na anyị gụnyere nnabata, nnweta, ma ọ bụ ọrịre nke ihe niile ma ọ bụ akụkụ nke akụ ya, a ga-agwa gị site na email na / ma ọ bụ ọkwa a ma ama site na weebụsaịtị anyị banyere mgbanwe ọ bụla na inwe ma ọ bụ ojiji nke ozi nkeonwe gị, yana dị ka nhọrọ ọ bụla ị nwere ike ịnwe banyere ozi nkeonwe gị na ndị ọzọ nke atọ na nkwenye mbụ gị ịme ya.
Nche - Otu anyị si echebe data gị:
Nche nke ozi nkeonwe gị dị anyị mkpa. Anyị na-ewere usoro ezi uche dị na azụmahịa ma na-agbaso ụkpụrụ niile anabatara iji kpuchido ozi ị nyere anyị, ma n'oge nnyefe ma ozugbo anyị natara ya. Dịka ọmụmaatụ, a na-ebufe ozi ị nyere site na izo ya ezo site na iji teknụzụ dịka teknụzụ nchekwa nchekwa (SSL).
Ọ dịghị usoro nke nnyefe n'elu ,ntanetị, ma ọ bụ usoro nchekwa kọmputa, dị nchebe 100%. Yabụ, anyị enweghị ike ịkwado nchebe zuru oke nke ozi gị.
N'ezie SSL dị mfe na mgbakwunye SSL dị mfe anaghị arụ ọrụ ozi njirimara ọ bụla, yabụ GDPR anaghị emetụta plugins ma ọ bụ ojiji nke plugins ndị a na weebụsaịtị gị. Nwere ike ịchọta iwu nzuzo anyị ebe a.
Nkwupụta Nzuzo Mmelite:
Anyị nwere ike imelite nkwupụta nzuzo a iji gosipụta mgbanwe na weebụsaịtị anyị dịka o metụtara ozi anakọtara site na gị yana ojiji anyị ji ya.
Ọ bụrụ ngbanwe ahụ metụtara etu anyị si eji ma ọ bụ jikwa ozi anakọtara site na gị, LifeBogger ga-ezitere gị na / ma ọ bụ gị, ma ọ bụ tinye ọkwa ebe ị na-ebu ụzọ nweta ngwa a tupu mgbanwe ahụ amalite ịdị irè. Anyị na-agba gị ume ka ị na-enyocha oge a oge ụfọdụ maka ozi kachasị ọhụrụ na omume nzuzo nke LifeBogger.
N'akụkụ a, anyị ga-akọwara gị usoro ndị anyị nwere iji dozie nsogbu data, ma ọ bụ ikike ma ọ bụ nke dị adị dị ka sistemụ akụkọ dị n'ime, usoro ịkpọtụrụ, ma ọ bụ mmetọ ahụhụ.
Ọ bụrụ na oge ọ bụla LifeBogger enweta mmebi nke na-ebute nnweta data nkeonwe gị site n'aka ndị ọzọ, anyị ga-agwa gị n'ime awa 72.
Kedu ndị ọzọ anyị na-enweta data site na - ịnagide data ndị ọzọ:
Google, dịka onye na-ere ahịa nke atọ, na-eji kuki iji mee mgbasa ozi na LifeBogger. Ojiji Google nke kuki DART na-enyere ya aka iji mgbasa ozi nye ndị ọrụ dabere na nleta ha na LifeBogger.com na saịtị ndị ọzọ na Internetntanetị. Ndị ọbịa na ebe nrụọrụ weebụ nwere ike ịpụ na ojiji nke kuki DART site na ịga na iwu nzuzo nke mgbasa ozi Google na ọdịnaya ọdịnaya na URL ndị a - http://www.google.com/privacy_ads.html.
Offọdụ ndị mmekọ mgbasa ozi anyị nwere ike iji kuki na mgbama weebụ na saịtị anyị. Onye ọrụ mgbasa ozi anyị gụnyere M .Mediavine
Ọ dị mkpa iji rịba ama na LifeBogger.com enweghị ohere ma ọ bụ jikwaa kuki ndị a na-eji ndị mgbasa ozi ndị ọzọ.
Ị ga-enyocha nkwupụta nzuzo dị iche iche nke ndị ọrụ mgbasa ozi ndị ọzọ a maka nkọwa zuru ezu banyere omume ha nakwa maka ntụziaka gbasara otu esi apụ na ụfọdụ omume. Iwu nzuzo LifeBogger adịghị emetụta, anyị enweghị ike ịchịkwa ọrụ nke, ndị ọzọ na-akpọsa ma ọ bụ saịtị weebụ.
Ọ bụrụ na ị debanyere aha maka akwụkwọ akụkọ anyị ị nwere ike ịnweta ozi ịntanetị n'aka anyị. Nke a gụnyere mana ọnweghị oke na ozi ịntanetị azụmahịa na ozi ịntanetị ahịa. LifeBogger ga - ezipụ ozi ịntanetị nke ị gosipụtara n'ụzọ doro anya ma ọ bụ n'ụzọ doro anya (ndebanye aha, ịzụta ngwaahịa wdg.) Debanyere aha.
Na ntinye aka anyị na-anakọta adreesị email gị, aha gị, adreesị IP gị ugbu a na timestamp nke ntinye aha, adreesị IP gị na timestamp mgbe ị kwadoro ndenye aha gị na adreesị weebụ dị ugbu a ị debanyere aha. Anyị na-eziga ozi ịntanetị anyị site na ọrụ a na-akpọ sendgrid. Ozugbo ị nwetara email n’aka anyị, anyị na-esochi ma ọ bụrụ na imeghe email ahụ n’ozi email gị, ọ bụrụ na ị pịa njikọ dị na email na adreesị IP gị ugbu a.
Dị ka ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ ndị ọzọ, anyị na-eji faịlụ log. Ihe ọmụma n'ime faịlụ ndekọ gụnyere internet protocol (IP) adreesị, ụdị ihe nchọgharị, Ntanetị Ọrụ Ịntanetị (ISP), stampụ ụbọchị / oge, ndepụta / wepụ ụzọ, na ọnụọgụ nke ọnụọgụ iji nyochaa ihe ndị ahụ, nyefee saịtị, usoro ntụgharị ọrụ gburugburu saịtị ahụ, na ikpokọta ozi igwe mmadụ. Adreesị IP, na ozi ndị ọzọ dị otú ahụ adịghị ejikọta na ozi ọ bụla a na-amata.
Demographics na Mmasị na-akọ:
Nwere onwe gị ịkpọtụrụ anyị site na iji ibe kọntaktị anyị, ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ gbasara amụma nzuzo a.